Manambara ny fiarahana miombona antoka ara-botoaty miaraka amin’ny KIRRT · Global Voices teny Malagasy
Tehirizin'ny tranonkala Kirrt ireo asa sy tantaranà Punjabi mpanao taokanto
Voadika ny 01 Septambra 2019 12:18 GMT
Pikasary avy amin'ny tranonkala Kirrt.
Faly ny Global Voices manambara ny fiarahana miombona antoka amin'ny tetikasa Kirrt izay mikaroka sy manasongadina ireo mpanao asa tanana ary mpanakanto avy ao amin'ny faritr'i Punjab ao India.
Amin'ny teny Punjabi, midika hoe ‘fanamboarana’, ‘fanaovana’, na ‘famoronana’ ny hoe Kirrt. Avy amin'ny teny Sanskirt hoe Krit, na Kriti izay mitovy dika amin'izany ihany no fototra niavian'ilay teny. Ao amin'ny kolontsaina Punjabi, heverina ho toy ny mendri-kaja sy zava-dehibe amin'ny fiadanana ara-panahy ny miasa amin'ny tanana sy mizara miaraka amin'ny hafa.
Bokintsary izay anangonana ireo tantaran'ireo mpanao asa tanana ireo sy ny asany ho ao anaty lahatsoratra, lahatsary sy sary, ny tranonkala Kirrt mba hizarana izany amin'ny mpijery maromaro kokoa. Ahitana an'i Gurdeep Singh Dhaliwal (mpanoratra, mpaka sary), Navjeet Kaur (mpamorona endrika), Jasdeep Singh (mpandika teny, mpanonta lahatsoratra) ary i Satdeep Gill (mpanoratra, mpaka sary) ireo olona ambadik'ilay tetikasa.
Ny ekipa Kirrt miaraka amin'ilay mpakanto Avtarjeet Dhanjal sy ilay mpanoratra Surjit Patar. Sary avy amin'ny Satdeep Gill. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Tao anatin'ny tafatafa fanadihadiana niarahany tamin'ny The Tribune India, manazava ny filamatry ny Kirrt i Gurdeep :
Mihevitra ny lafiny ilàna zavatra iray ny olona. Noho izany, natao mba hampisehoana amin'ny olona ny fanantonana ny fiainana iray izay tsy mirona amin'ny ilaina ity hetsika fisantaranay ity. Na iza na iza tsy hisy hahazo tombontsoa amin'ny taokanto toy izany. Ara-traikefa izany. Ohatra, nanao printy karatra postaly misy sarin'ny kirrtis sy ny fitaovany izahay. Mety tsy hividy azy ireny ny olona, fa kosa tiany ilay asa kanto.
Sary avy amin'ny Kirrt.
Asongadin'ilay tranonkala ireo tantara toy ny an'ity mpivaro-trondro iray ity, izay mizara ny ady tsy maintsy natrehany sy ny fianakaviany mba hitaizana ny zanany sy hampanambady azy ireo:
Yeramma no anarako ary 50 taona aho. Teraka sy lehibe tany Visakhapatnam. Niditra tao anatin'ny tsenan'ny fivarotana trondro sy hazan-dranomasina hafa aho rehefa feno folo taona. Tany afovoan'ny andian-taona 1970 tany ho any, nivarotra trondro teny amoron-dranomasina ny reniko. Tsy nianatra aho mba ho afaka hanaraka an-dreniko. [..]
Yerrama amperin'asa. Sary avy amin'ny Kirrt.
Rehefa Alahady, rehefa be mpanjifa izahay, farafahakeliny aho mahalafo karazana trondro folo ankoatra ireo patsabe sy fozabe. Ny Alahady sy Talata no tena be olona.
Manao asa tselika isanandro ny vadiko, toy ny asa fanorenana na ny fandrafetana. [..] Samy manana ny lanjany lehibe avokoa ny fidiram-bolanay roa amin'ny fitantanana ny tokantranonay. Mihasarotra izany rehefa misy ny rivodoza. Miatrika olana ihany koa izahay mandritra ny talio.
Ity misy tantara iray hafa ana mpanamboatra fitaovam-piadiana, i Pritam Singh:
Efa taranaka maro izay, misokitra ireo fitaovam-piadiana nentim-paharazana izahay; izahay no taranaka fahefatra. Amin'ny maha-mpanao asa tanana azy, afaka nanamboatra na inona na inona ireo razambenay, sarety hatramin'ny basy. [..]
Fanamboarana fitaovam-piadiana amin'ny tanana. Sary avy amin'ny courtesy Kirrt.
Vita avy amin'ny vy notefena, hazo Sheesham ary fitaovana nentim-paharazana maro hafa ireo fitaovam-piadianay. Amin'ny tanana daholo no anaovanay ny fandrendrehana sy ny fanefena. Noho izany, mora ho an'ireo mpanjifa mahay mandinika ny manavaka ireo fitaovam-piadianay.
Na izany aza, matahotra i Pritam fa tsy ho tafita any amin'ny taranaka fahadimy ilay fahaizana:
Nahazo diplaomana ITI ny zanako lahy ary miasa toy ny mpanamboatra fiara ankehitriny. Nianatra ny asa nentim-paharazana izy, fa tsy te-hampandroso izany. Te ho any am-pitandranomasina izy.
Sary natootry ny Kirrt.
Hanasongadina tantara bebe kokoa avy ao amin'ny tranonkalan'ny Kirrt izahay amin'ny ho avy.
Efa namoaka boky mikasika ny tononkalo Punjabi ny Kirrt. Ny hitombo ho lasa trano fanontana boky sy trano natokana ho an'ny zava-kanto no tanjona manaraka an'ny Kirrt.